नेपालकी बुहारी बन्दै बलिउड अभिनेत्री श्रद्धा कपुर, को हुन् ति नेपालि युवा ? - www.dthreeonline.com
नेपालकी बुहारी बन्दै बलिउड अभिनेत्री श्रद्धा कपुर, को हुन् ति नेपालि युवा ?
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत्र ०८, २०७५ समय: १७:५९:५८
एजेन्सी/ बलिउडका लागि पछिल्लो वर्ष विवाहको मौसम रह्यो । सोनम कपुर–आनन्द अहूजा, दीपिका पादुकोण-रणबीर सिंह, प्रियंका चोपडा-निक जोनसजस्ता सेलिब्रिटीले सन् २०१८ मा विवाह गरे । बलिउड अभिनेत्री श्रद्धा कपुरले नेपाली यु्वकसँग बिहे गर्ने भएकी छिन् । भारतीय मिडिया नवभारत टाइम्सकाअनुसार श्रद्धा चाँडै नै नेपालकी बुहारी बन्ने भएकी छिन् । श्रद्धा अर्को वर्षसम्म आफ्ना प्रेमी सेलिब्रिटी फोटोग्राफर रोहन श्रेष्ठसँग विवाह गर्न सक्छिन् ।
रोहन बलिउडका चर्चित सेलिब्रिटी फोटोग्राफर राकेश श्रेष्ठका छोरा हुन् । बलिउड बबलका अनुसार श्रद्धा गत एक वर्षदेखि रोहनसँग डेट गरिरहेकी छिन् । दुबैले एक अर्कालाई लामो समयदेखि चिन्दछन् । ३४ वर्षे रोहनको मूलघर काठमाडौं हो । उनका बुवा राकेश श्रेष्ठ काठमाडौंमा जन्मिएका हुन् ।
फोटोग्राफीमा रुची राख्ने राकेश मुम्बई गएर सेलिब्रिटीको फोटो खिच्न थाले र उतै चर्चित भए । रोहनको जन्म भारतको मुम्बईमा भएको हो । उनले न्यूयोर्क फिल्म एकेडेमीमा अध्ययन गरेका थिए । उनले बुवाको पेशालाई पछ्याउँदै आफू पनि यही क्षेत्रमा स्थापित भए । रोहनले फिल्मफेयर, इन्डिया जिक्यू, फेमिना, कस्मोपोलिटन, पिपल आदिका कभर फोटोसुट गरिसकेका छन् । उनले बलिउडका शीर्ष कलाकारको फोटोसुट पनि गरिसकेका छन् ।